Talaado, Sept 8 , 2020-Howl-gal ciidan oo ka socda duleedka Kismaayo iyo waddooyin xeran – LaacibOnline
Talaado, Sept 8 , 2020-Howl-gal ciidan oo ka socda duleedka Kismaayo iyo waddooyin xeran
Howl-gal ciidan oo ka socda duleedka Kismaayo iyo waddooyin xeran
Talaado, September 8, 2020 (HOL) – Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan qeybta Danab ee ka howl-gasha Jubaland oo kaashanaya ciidamada JSF-ta Jubaland iyo kuwa AMISOM ayaa waxay howl-gallo ka billaabeen deegaanno hoostaga Jannaay Cabdalle oo 60KM ka baxsan magaalada Kismaayo. War qoraal ah oo ciidamada Danab ay soo dhigeen bartooda Twitter-ka ayaa waxay ku qeexeen in waddooyinka soo gala Jannaay Cabdalle la xiray muddo kooban oo laga fulinayo howllo ciidan oo ka dhan ah Al-shabaab, sida lagu sheegay qoraalka Danab ay baahiyeen. Howl-galka ay ka socda deegaannadaas ayey ciidamadaan waxay sheegeen iney uga gol leeyihiin, in guud ahaanba deegaannadaas ay ka saaraan Al-shabaab oo marar badan kula dagaallamay.
Laakiin howl-galkaan ayaa kusoo aadaya xilli shalay saldhig military oo ku yaalla deegaanka Jannaay Cabdalle uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah. Qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa Jubaland, waxaana ku dhaawacmay askar dhowr ah oo ay ku jireen kuwa Mareykan ah.
Al-shabaab ayaa isla shalayba mas’uuliyadda weerarkaas sheegatay.
← Bowen, Soucek, Wilshere, the board – West Ham’s pre-season winners and losers
14 Al-Shabaab killed in attack on town near Mogadishu: army →
Isniin, Oct 5 , 2020-Madaxweyne farmaajo oo heshiis la gaaray madaxweynaha Eritrea
Axad, Aug 23, 2020-Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid oo ka badbaaday qarax miino
Talaado, Sept 29, 2020-Lafta-gareen oo badi xildhibaannada Koonfur galbeed lagasoo doorto Muqdisho kula kulmay